AT&T: နောက် AIG လား။ | Martech Zone
ငါအိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းနေ့တိုင်းနီးပါး, ငါ U-Verse အကြောင်းကို AT & T ကနေလှပသောတိုက်ရိုက်အပိုင်းအစရ။ သူတို့ကျွန်တော့်ကိုရောင်းလိုက်ပြီ ကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းတိုးတက်ခြင်း၊ တီဗွီပရိုဂရမ်းမင်း၊ DVR ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ol အဆီအထုပ်ကြီးလိုချင်ပါတယ်။ အားလုံးလိုချင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်တိုက်ရိုက်စာတစ်စောင်မှညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလျှောက်သွားခဲ့သည်။ ငါနယ်ပယ်အားလုံးဖြည့်စွက်သည်, အဆုံးမဲ့သတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာများမှတဆင့်နှိပ်, ချိန်းဆိုထားသည် ... တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်းတောင်းဆိုချက်ကို processing အခါအဆုံးမှာတုံ့ပြန်မှုရရန်ငါ AT & T ကိုခေါ်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလုပ်ချင်တာကတော့ AT&T ကိုခေါ်တာပါ။
သငျသညျကို AT & T ကငါ့ကိုခဲ့! ငါ့ကိုစာတစ်စောင်ရေးပြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဝယ်ယူမှုကို ၇ နှစ်ကြာသည်အထိ - ကျွန်ုပ်သည် Indianapolis သို့ပြောင်းပြီးကတည်းက ကျွန်တော့်လိပ်စာနဲ့ပြaနာရှိပါသလား။ မရဘူးလား။
ငါ့ကိုအသိပေးရန်သင်လျစ်လျူရှုထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်လိပ်စာသို့စျေးကြီး။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၄ ရောင်စုံဘရိုရှာများကိုတစ်ရက်တည်းမပို့တော့ပါသလော။ ကျေးဇူးပြု?! ငါ့ကို U-Verse ရောင်းဖို့တစ်လကို ၁၀ ဒေါ်လာကနေ ၂၅ ဒေါ်လာလောက်သုံးရမယ်။ ငါရောင်းလိုက်ပြီ။ သင်သဘောတူညီမှုကိုပိတ်လိုက်မည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မသိပါ မင်းငါ့ကိုလိုချင်လား ငါ့ကိုခေါ်တော်မူပါ၊ သင်၏အွန်လိုင်းစာရင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအကြားသင်၏စာရင်းကိုစစ်ဆေးရန်မခက်ခဲပါ။ ငွေအမြောက်အများစုဆောင်းနိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်ငါ၏အခွင့်အလမ်းကိုအရှိန်မြှင့်, ငါသည်သင်တို့၏န်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည် သပိတ်မှောက်သွားမယ့်အကြောင်းကို... စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအလယ်၌တည်၏။ စစ်တပ်မှအရံတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏အလုပ်များကိုကာကွယ်ရန်တောင်းဆိုမှုများကိုသင်တုန့်ပြန်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ရေချိုးခန်းတွင်ဆပ်ပြာနှင့်အိမ်သာသုံးစက္ကူများရှိရန်မလိုအပ်ကြောင်း၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုနှစ်အနည်းငယ်အထိအတိုးမပေးလိုကြောင်း၊ နောက်တစ်နှစ်
ဤစီးပွားရေးကျဆင်းမှုအလယ်၌ ၂% သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသံမဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များတိုးလာခြင်းကိုမဖုံးကွယ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မဖတ်မှီအထိဖြစ်သည်။
ပြီးတော့မင်းရဲ့စီအီးအို Randall Stephenson ကသူရဲ့အိမ်က ၂၂% တိုးလာပေမယ့်လျော်ကြေးငွေဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ ၁၅ သန်းလောက်ကျဆင်းသွားတာကိုဖတ်ဖူးတယ်။ ၎င်းတွင်အခွင့်အရေးအတွက်ဒေါ်လာ ၃၇၆,၀၀၀၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၄၂၀၀၀ နီးပါး၊ AT & T ၏ကော်ပိုရေးရှင်းဂျက်လေယာဉ်ကိုကိုယ်ပိုင်သုံးရန်ဒေါ်လာ ၈၃၀၀၀ နှင့်ဘဏ္counselာရေးအကြံပေးခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀၀ တို့ပါဝင်သည်။
၂၀၀၈ တွင်စီးပွားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်သည် U-Verse ဖောက်သည်မဟုတ်သော်လည်း ၂၀၀၈ တွင် AT&T သည်ဒေါ်လာ ၁၂.၉ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီးယခင်နှစ်ကဒေါ်လာ ၁၂.၀ ဘီလီယံရှိခဲ့သည်။ ရောင်းအားသည်ဒေါ်လာ ၁၁၉ ဘီလီယံမှဒေါ်လာ ၁၂၄ ဘီလီယံသို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ၄.၂% တိုးတက်လာခဲ့ပြီးသင်၏ ၀ င်ငွေသည် ၇.၅% တိုးတက်ခဲ့သော်လည်းသင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုလစာတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါလော။
ငါလည်း iPhone လိုချင်တယ် သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်သာထဲသို့ပိုက်ဆံသွန်ချသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းမသေချာပါ။ (လှိုင်းကျယ်သည်အထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ) နှင့်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများကိုကင်ဆာကဲ့သို့ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်။ ငါကပြည်ထောင်စုကောင်လေးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာသူတို့ကိုငါအားပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။
Tags: at & tတိုက်ရိုက်မေးလ်Randall stephensonဦး - အခန်းငယ်
မတ်လ 30, 2009 မှာ 4: 12 pm တွင်
ငါ iPhone လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါငွေမလုံလောက်ဘူး။ - (((
ဧပြီ 1, 2009 မှာ 1: 11 pm တွင်